Himalaya Dainik » बोल्दा बोल्दै आलियाको मुखबाट निस्कियो यस्तो शब्द, करिना समेत लाजले भुतुक्कै (भिडियोसहित)
बोल्दा बोल्दै आलियाको मुखबाट निस्कियो यस्तो शब्द, करिना समेत लाजले भुतुक्कै (भिडियोसहित)
यतिबेला करणसँगको कुराकानीमा एक प्रश्नको जवाफमा आलियाले करिनाको तारिफ गर्न सुरु गरिन् । आलियाले भनिन्, ‘करिनाले एकपछि अर्को फिल्ममा काम गरिरहेकी छिन् । मानिसहरु भन्छन् कि विवाह भएपछि जीवन थोरै स्लो हुन्छ तर करिनाको यस्तो भएन ।
कतिले बच्चा भएपछि जीवन स्लो हुन्छ पनि भन्छन् तर उनको यस्तो पनि भएन । उनी सधैंझैँ हाम्रो लागि प्रेरणा बनेकी छिन् । मेरोलागि मात्र होइन मेरा साथीहरुका लागि पनि ।’
यति भन्दा भन्दै आलियाको मुखबाट अश्ली ल शब्द निस्कन्छ जुन सुनेर करिनाले आफ्नो हात मुखमा राख्दै भनिन्, ‘भर्खरै के भयो ?’ करणले पनि दोहोराएर उनले के भनिन् भनेर सोधे ? जब यसबारे थाहा भयो कडा स्वरमा आलियालाई भने, के मैले तिमीलाई यसरी नै हुर्काएँ ?
यो घट ना केही महिना अगाडी एउटा फिल्म फेष्टिभलमा भएको हो । तरपनि हालसम्म यो भिडियो भाइरल छ। करिना र आलिया मिल्ने अभिनेत्री मध्यकी दुई हुन् । आलिया करिनाको फ्यान समेत हुन् ।